Taariikh Nololeedka Quruxleyda Bollywood-ka Juhi Chawla Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Taariikh Nololeedka Quruxleyda Bollywood-ka Juhi Chawla Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
Taariikh Nololeedka Quruxleyda Bollywood-ka Juhi Chawla Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
Juhi Chawla waxay maanta u dabaal dagtay sanad guuradeedii 50-aad sidaa darteed anagoo tixgalineyno maqaamka sare oo ay xidigtan fanka ka gaartay waxaan gar waaqsanay inay muhiim tahay inaan idinla wadaagno taariikh nololeedkeeda.
Juhi Chawla mudo 31-sano ku dhow ayay Bollywood-ka ka tirsan tahay waxayna soo martay marxalado kala duwan ilaa ay ka noqotay atirishada Bollywood-ka ugu awooda badan 90-kii.
Xidigtan waxay atirishooyinka kale dheer tahay soo jiidasho u gaar ah, qosol qalbiga taabanayo, shactiro sameynta iyo inay jeceylka si wacan shaashadaha ugu soo bandhigi karto.
Juhi Chawla Iyo Bilawgii Nolosheedii Marxaladaha Ay Soo Martay:
Juhi waxay ku dhalatay Ambala, Haryana, Waqooyiga Hindiya sanadii 1967 waxayna marwalbo xasuusataa inay 13 bisha November tahay dhalashadeeda qaaska ah tahay.
Juhi aabaheed wuxuu ka tirsanaa waaxda daqliga dawlada Hindiya wuxuuna ahaa sarkaal siweyn loo tixgaliyo dhanka fanka waxaa ehel u ahayd Kiara Advani oo ahayd atirisho Bollywood-ka ka tirsaneed sidoo kalena Juhi eedo u ahayd.
Juhi waxbarashadeedii hoose iyo dhexe waxay ku qaadatay Fort Convent School, Mumbai sidoo kalena heerka sare waxay taqasuskeeda qaybta Human Resource ku qaadatay Sydenham College, Mumbai.
Nasiib wanaag quruxdeedii ayaa la isla arkay waxayna sanadii 1984 ku guuleesatay Miss India ama gabadha Hindiya ugu qurxoon.
Sidoo kalena tartankii quruxda Jaamacadaha aduunka loo qabtay Miss Universe sanadii 1984 waxay ku guuleesatay abaal marinta labiska iyo naqshada dharka ugu qurxoon (Best Costume Award).
Juhi sidoo kale waxay aad u baratay cayaaraha dhaqanka ayadoo dhalin yar haka reebin inay xitaa sida heesaha loo qaado ay baratay waxayna ahayd gabar dadaal badan oo jecleyd inay xirfad walbo wax ka fahanto.
Juhi Soo Galideedii Fanka Iyo Kartidii Ay Muujisay:
Qurulxeydan ayadoo dhalin yar ayay aqbashay inay door kooban ka qaadato filimkii jilaayaasha miisaanka culus la isugu keenay Sultana too ay Dharmendra iyo Sunny Deol la jishay.
Balse filimkan ganacsi ahaan wuu guul dareestay sidoo kalena Juhi inay ku jirtay iyo in kale lama dareemin madaama aysan ku laheyn boos wacan.
Xidigtan waxay u guurtay sameynta filimada gobolada Regional Movies ayadoo wax ka jishay filimkii Classic noqday Premaloka oo ay shirkada reer Kanada lahaayeen wuxuuna noqday Blockbuster weyn sidoo Juhi si weyn ayaa loogu amaanay filimkan sanadii 1987 la daawaday.
Nasiibka ayaa Juhi si wacan ugu hiilayay madaama ay kaaliin muuqato ka qaatay filimkii jeceylka ahaa Qayamat Se Qayamat Tak oo ay Aamir Khan la jishay.
Juhi xidigta ugu shacbiyada balaaran Hindiya ayay noqotay waxayna filimkii Qayamat Se Qayamat Tak ku qaadatay atirishada ugu wanaagsan ee Bollywood-ka ku cusub taasi oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Qayamat Se Qayamat Tak wuxuu noqday filim dadka Hindiga dooqooda badalo madaama awal ay shacab weynaha aflaanta dagaalka jeclaan jireen waxayna Juhi noqotay quruxley la wada jecleedo mustaqbal wanaagsana Bollywood-ka ku yeelato.
Waxaa intaas u dheer Qayamat Se Qayamay Tak wuxuu u suura galiyay Juhi inay markii ugu horeesay abaal marinta atirishada ugu wanaagsan (Filmfare Best Actress Award) u tartanto balse kuma guuleesanin.
Juhi Iyo Marka Ay Guusha Saaxiib La Noqotay Kana Mid Noqotay Super Star-da Laga Dambeeyo 1990 ilaa 1993:
Juhi sanadii 1990 waxay la timid filimkii Classic noqday Pratibandh oo ay la jishay Chirenjeevi wuxuuna filimkan noqday mid guul weyn gaaray sidoo kalena Juhi ay amaan fara badan ku heshay weliba abaal marinta atirishada ugu wanaagsan ayay markeedii labaad u tartantay.
Isla sanadii 1990 filimkii weyngaa Swarg ayay Juhi door wacan ka qaatay waxayna la jishay Rajesh Khanna iyo Govinda asigoo noqday filimkan Hit weyn.
Juhi nasiibkeeda ayaa la isla arkay wuxuuna filim sameeyo walbo bilaabay bilawgii 90-kii inuu baadi goobo laakiin xidigtan filim walbo inay sameyso xiiso kuma heynin.
Juhi qaab jiliinkeedii ayay sare u qaaday waxayna sanadii 1992 Bollywood-ka kaga yaabsatay filimkii Bol Radha Bol ee Hit-ka weyn noqday waxayna Juhi la jishay filimkan Rishi Kapoor ayadoo markii 3-aad ugu tartantay abaal marinta Filmfare Awards.
Sanadii 1992 Juhi Chawla waxay ku qatintay filimkii Raju Ban Gaya Gentleman oo ay SRK la sameesay sidoo kalena guushii wacnaa gaaray waxaana markaas u bilaabatay la shaqeynta SRK oo ay aflaan badan oo wacan isla jileen sanado badan.
Sanadii 1993 waxaa lagu tilmaamaa sanadkii Juhi Chawla madaama ay sameesay aflaantii lacagaha ugu badnaa soo xareeyeen sidoo kalena abaal marin walbana ay ku guuleesatay.
Filimkeedii kowaad wuxuu Lootere oo ay Sunny Deol, Naseeruddin Shah, Chunkey Pandey iyo Anupam Kher la sameesay Juhi doorkeeda aad ayaa loo amaanay sidoo kalena filimkan guul fiican ayuu gaaray.
Filimkeedii labaad wuxuu ahaa Aaina oo ay Jackie Shroff la jishay wuxuuna filimkan ka mid noqday taariikh ahaan aflaanta ugu jiliinka wacan oo ay ebid Juhi Chawla sameesay sidoo kalena Hit weyn ayuu noqday.
Sanadka hakuu wacnaado ayay sheekada u ahayd Juhi waayo filimkeedii sedexaad 1993 wuxuu ahaa Hum Hain Rahi Pyaar Ke oo ay Aamir Khan la sameesay wuxuu noqday filim Classic ah oo lagu daray diiwaanka aflaanta Bollywood-ka ugu wanaagsan oo ay ebid sameeyeen.
Filimka Hum Hain Rahi Pyaar Ke wuxuu u suura galiyay Juhi inay markii ugu horeesay ku guuleesato atirishada ugu wanaagsan Bollywood-ka oo ay shirkada Filimfare Awards bixiso.
Juhi oo aad u faraxsan waxay sanadii 1993 ku qatintay filimkii Blockbuster-ka weyn noqday Darr oo ay la jishay Sunny Deol iyo SRK sidoo kalena si wacan ayay Juhi filimkan doorkeedii dhibka badnaa kaga baxsatay.
Juhi Iyo Markii Ay Hoos U Dhac Weyn La Kulantay 1994 Ilaa 1996:
Juhi inta badan filimadii ay sameesay sanadii 1994 waxay noqdeen kuwo guul dareesteen sidoo kalena boqoradii Bollywood-ka hoos u dhac weyn ayay dhadhamisay.
Laakiin sanadii 1995 ayay xoogaa soo yara kacleesay ayadoo sameesay filimkii Raam Jaane ee Hit-ka noqday oo ay SRK la jishay iyo filimkii Naajayaz ee Average-ka noqday oo ay Ajay Devgan la jishay.
Xidigtan quruxda badan sanadii 1996 sidoo kalena madaxa dhulka kama ceshanin waxayna sameesay sedex filim kaliya filimkii Loafer oo ay Anil Kapoor la jishay ayaa guul dhex dhexaad ah gaaray balse filimada Daraar iyo Bandish labaduba wey ka dhaceen.
Juhi Chawla Iyo Markii Ay Soo Rogaal Celisay 1997 ilaa 1999:
Dadka Boxoffice-ka ka faaloodaan ayaa qoreen in Juhi Chawla calankeedii dhacay laakiin xidigtan aya si la yaab leh usoo laba kacleesay.
Sanadii 1997 wuxuu noqday sanadkii Juhi ayadoo sameesay aflaan guulo waa weyn gaareen waxaana ka mid ah Yess Boss (Hit), Ishq (Super Hit), Deewana Mastana (Hit) iyo Mr. & Mrs. Khiladi (Semi Hit).
Juhi amaan aan lasoo koobi karin ayay ku heshay dhamaan filimadii ay sanadii 1997 sameesay weliba qaab jiliinkeeda shactirada ku dheehan ayaa aad loo amaanay waxayna qabsatay masraxa madaama ay si adag usoo laba kacleesay.
Sanadii 1998 markale SRK ayay la shaqeesay waxayna la jishay filimkii Duplicate ee Mahesh Bhatt sameeyay balse filimkan sidii laga filaayay ma uusan noqonin waana mid guul dareestay gudaha Hindiya inkastoo suuqyada caalamka uu wacdaro ka dhigay.
Sidoo kale 1998 waxay sameesay filimkii Jhoot Bole Kauwa Kaate oo ay Anil Kapoor la jishay inkastoo filimkan guul dareestay hadana sheeko ahaan siweyn ayaa loo amaanay.
Juhi Chawla sanadii 1999 waxay la timid filimkii wacnaa Arjun Pandit oo ay Sunny Deol la jisha filimkan guuleestay siweyn ayaa Juhi loogu amaanay madaama ay kusoo bandhigtay waji aan looga baranin.
Bilawgii Qarnigan Juhi Iyo Heerkeedii Fanka Oo Is Badalay 2000 ilaa Haatan:
Juhi waxay bilaawday inay aflaanta maal galiso sidoo kalena SRK ayay xiriir wada shaqeyn ee dhanka filim maal galinta wada gaareen laakiin filimkoodii kowaad Phir Bhi Dil Hai Hindustani ee sanadii 2000 soo baxay wuu guul dareestay.
Sidoo kale xidigtan aflaan guul dareesteen ayay 2000 la timid oo ay ka mid ahaayeen Gang, Karobaar iyo kuwo kale.
Juhi sanadii 2001 waxay SRK la sameesay filimkii sida weyn loogu qasaaray ee lagu magacaabo One 2 Ka 4 wixii markaas ka dambeeyay xidigtan waxay bilaawday inay doorar kala duwan sameyso.
Filimkii Ek Rishtaa – The Bond Of Love ee Akshay Kumar iyo Karishma Kapoor hogaamiye ka ahaayeen ayay door walaaltinimo ku matashay wuxuuna noqday filim guul dhex dhexaad gaaray sanadii 2001.
Wixii markaas ka dambeeyay Juhi waxay bilaawday inay sameyso aflaan sheeko ahaan aad loo amaanay balse ganacsi ahaan guul dareesteen oo ay door wacan ka qaadatay waxaana ka mid ah 3 Deewarein, 7½ Phere iyo My Brother Nikhil.
Sanadii 2006 filimkii weynaa Salaam-E-Ishq ayay door fiican ku yeelatay ayadoo Anil Kapoor la jishay balse filimkan wuxuu noqday mid siweyn loogu qasaaray.
Sidoo kalena sanadii 2008 filimadii Bhoothnath iyo Krazzy 4 ayay doorar fiican ku yeelatay ku waasi oo guul dhex dhexaad ah gaareen.
Dhaawanahan waxay boos la taaban karo ku yeelatay filimkii Son Of Sardaar oo ay Sanjay Dutt xaaskiisa ku matashay waxaana filimkan hogaamiye ka ahaayeen Ajay Devgan iyo Sonakshi Sinha.
Juhi sanadkii 2014 waxay sameysay filim aad loo amaanay sheekadiisa Gulaab Gang kaaso ay la sameesay Madhuri Dixit inkastoo filimkan guul dareestay hadana Juhi booskeedii laadarnimo si wacan ayaa loo amaanay sanadkii aan soo dhaafnay ee 2016 waxay sameysay filimka lagu magacaabo Chalk N Duster.
Filimkaan waxaa Juhi la hogaaminayen Shabana Azmi iyo Zarina Wahab balse nasiib xumo filimkaan wuu burburay oo Disaste ayuu ka noqday Box-officeka.
Juhi Chawla Iyo Nolosheeda Gaarka Ah:
Juhi Chawla waxay guursatay sanadii 1995 ganacsadaha weyn ee warshadaha iska leh Jay Mehta, labadan lamaane waxaa u joogaan gabar lagu magacaabo Jhanvi oo dhalatay 2001 iyo wiil lagu magacaabo Arjun oo dhashay sanadii 2003.
Juhi iyo seygeeda waxay iska leeyihiin kooxda cayaarta Cricket-ka cayaarto Kolkata Knight Riders sidoo kalena SRK ayaa kooxdan wax ka leh waxayna kooxdan ku iibsadeen xagaagii 2008 lacago lagu sheegay $75 million.
Kooxda Kolkata Knight Riders qiimaheeda sare ayuu u kacay madaama ay labo jeer ku guuleesatay horyaalka Hindiya waxaana lagu qiimeeyay naadigan inay suuqyada caalamka 2 sano kahor ka joogtay $42.1 million.
Juhi walaalkeed Bobby Chawla wuxuu geeriyooday sanadii 2014 kadib markii uu mudo 4-sano ah koomo ku jiray wuxuuna ahaa madaxa ugu sareeyo Shirkada Red Chillies Entertainment ee uu SRK iska leeyahay.
Waxaa Aqrisay 1,887